Emelitere Yudonpay ka ị nwee ike ijikwa isi ihe na onyinye gị karịa | Esi m mac
A na-emelite Yudonpay ka ị nwee ike ijikwa isi ihe na onyinye gị ngwa ngwa
Brandsdị na ụlọ ọrụ niile chọrọ ijigide ndị ahịa ha ma maka nke a, ha emeela kaadị iguzosi ike n'ihe nke ị nwere ike isonye na klọb nke ụlọ ahịa kachasị amasị gị na nweta nkwalite, onyinye, ego, onyinye na, na mpempe, ụdị nile nke nanị uru. Agbanyeghị, klọb ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche na nke ọzọ, yana mgbe anyị nwere ọtụtụ kaadị iguzosi ike n'ihe, iji ha eme ihe ga-abụ ezigbo odyssey.
Yudonpay na-etinye kaadi kaadị gị niile n’usoro, na-ezere ịnwe ha na obere akpa gị na na-eme ha ka ha dị n’okpuru otu ngwa. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị echefu kaadị nke azụmahịa ebe ị nọ ma ị nwere ike iji ohere nke nkwalite dịnụ mgbe niile. Na mgbakwunye, ugbu a, emelitere Yudonpay na ọtụtụ ndozi yana nnabata ọrụ ọhụrụ nke ị ga - eji mee ya nweta onyinye gị ngwa ngwa karịa.
1 Yudonpay, ngwa ị chọrọ
2 Ebe ahia ohuru Yudonpay na enyere gi aka inweta onyinye na nkwalite
Yudonpay, ngwa ị chọrọ
Na Spain anyị maara ọtụtụ ihe gbasara kaadị ntụpọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, dị ka otu nnyocha nke Nielsen mere, nkezi iji ngwa ngwa nke iguzosi ike n'ihe bụ 25%, karịa nkezi ụwa nke 23%, na ọbụna karịa karịa nkezi 18% Europe. Tụkwasị na nke ahụ, na 2016, ego hapụtara nke kwekọrọ na iguzosi ike n'ihe bụ 6.600 nde euro, nke na-anọchite uto nke 15% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. O doro anya na ụdị na-ekenye ọtụtụ ngwa iji wepụta onyinye maka ndị ahịa ha, agbanyeghị, naanị na Yudonpay ị nwere ike iji ohere nkwalite gị niile.
Yudonpay bụ ngwa ịchọrọ (budata ya n'efu) n'ihi na gị, dịka ọtụtụ ndị ọrụ ndị ọzọ, nwere ọtụtụ kaadị iguzosi ike n'ihe, n'ọtụtụ oge, ị naghị eji uru. Maka ndị na-amaghị ya, Yudonpay bụ ngwa dị maka iPhone na-enye gị ohere dịrị n'otu gị iguzosi ike n'ihe kaadị na-ebu ha mgbe niile na gị na iPhone.
Ugbu a ị nwere ike ijikọ ruo klọb 171 ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ama ama dịka Meliá, Kiabi, Air Europa, Renfe, American Express, Bodybell, NH, Cinesa, Vips, Druni, Eroski, Fnac, Rakuten, Galp, Game, H&M, Iberia ,, KIKO, BP, Repsol, Shell, Travellọ Njem na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị otu a, ị gakwaghị achọ kaadi na obere akpa gị ma ọ bụ obere akpa gị, mepee Yudonpay ma rite uru n'ọkwalite ụlọ ahịa ị nọ. Nke ahụ dị mfe.
Ma ugbu a Yudonpay dị mma karịa na mbụ n'ihi na mmelite ọhụrụ ọ na-etinye atụmatụ ahụ n'ọma ahịa, isi ihe ozo na ihu oma ya ka ichoro iji ya mee ihe mgbe obula.
Ebe ahia ohuru Yudonpay na enyere gi aka inweta onyinye na nkwalite
2.0dị XNUMX gụnyere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ nke anyị nwere ike ịkọwapụta ọhụrụ wallet imewe n'ihi na kwukwara ebe kaadị, ọhụrụ nhọrọ nke kaadị ọkacha mmasị nke ahụ na-enye gị ohere itinye kaadị ndị ị kacha jiri na ọnọdụ mbụ, imepụta ọhụụ na nnukwu ojiji nke ndebanye aha mbụ na / ma ọ bụ nbanye nbanye, nkwupụta ntanye ekele nke ị gaghị echefu otu n'ime nkwalite ndị dị na ụlọ ahịa gị na mbụ, na ahịa, nnukwu ihe ọhụrụ nke Yudonpay, mgbapụ nke na-egosi nkwalite na ngwaahịa niile ị nwere ike ịnweta dabere na klọb ị gbakwunye na ngwa.
Site ugbu a gaa n'ihu, ị gakwaghị elele isi ihe ị nwere, ndị ị na-enweghị iji nweta onyinye ịchọrọ ... Ugbu a usoro a na-arụ ọrụ na ntụgharị iji mee ka ọ dịrị gị mfe: nke mbụ kaa akara na ngwaahịa ịchọrọ, mgbe ahụ ị na-agbakọta isi ruo mgbe ị nwetara ya. Nke ahụ dị mfe.
Hapụ dị ka ihe gara aga nke iburu ọtụtụ kaadị wee gaa na nkasi obi na uru nke Yudonpay, ngwa maka iPhone na es kpamkpam enwerela onwe ya nke ị ga-eji wee rite uru niile dịịrị gị.
Ewoo! Ma ọ bụrụ na klọb ọ bụla adịghị na ngwa ahụ, ịnwere ike ịrịọ itinye ha ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » A na-emelite Yudonpay ka ị nwee ike ijikwa isi ihe na onyinye gị ngwa ngwa
Egwuregwu Solitaire ọhụrụ na-egosi na Applọ Ahịa Mac App
Apple Pay na-abata maka ndị ahịa CaixaBank na Imaginbank!